Facebook ပေါ်မှာ ရှောင်သင့်တဲ့ မိန်းမ ၁၀ မျိုး – Gentleman Magazine
Facebook ပေါ်မှာ ရှောင်သင့်တဲ့ မိန်းမ ၁၀ မျိုး
တစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ရည်းစားရှိသူထက်၊ ပို့စ်တင်၊ Like ပေး၊ Fb ပေါ်မှာ အချိန်ပိုပြီးဖြုန်းတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်လို့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ အထီးကျန်တဲ့ Status တွေ ဆက်တိုက်တင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒါ သူမ လူလွတ်ဖြစ်ကြောင်း ပြနေတာပါပဲ။ ခု နည်းပညာခေတ်ကြီးမှာ ကောင်းတာတစ်ချက်ကတော့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို မလိုက်ခင် သူမရဲ့ အပြစ်တွေကို ဝင်ပြီး စုံစမ်းလို့ရနေတာပါပဲ။ သူမ ကပ်စေးကုပ်လား? သောက်တတ်လား? ရည်းစားဟောင်းကို လွမ်းနေတုန်းလား ဆိုတာ FB Profile မှာ ဝင်ကြည့်လို့ရနေပါတယ်။
သင်သာ သဲလွန်စ ရှာတတ်ရင် သင်လိုက်မယ့် မိန်းမဟာ သင်နဲ့ ကိုက်ရဲ့လားဆိုတာ ကြိုတင် သိရှိထားနိုင်ပါတယ်။ ရှောင်သင့်တဲ့ လက္ခဏာ ၁၀ မျိုးကတော့
၁. အတက်ကြွလွန် မိန်းကလေး
သူမက ချိုသာပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတာတော့မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသေးအမွှားလေးကအစ စိတ်လှုပ်ရှားနေတတ်တဲ့ သူမကို ကြည့်ပြီး ကြာရင် သင် ရူးချင်လာပါလိမ့်မယ်။ လိပ်ပြာလေးတစ်ကောင်နဲ့တောင် စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးပါ။
၂. ဖင်ပိတ်ငြင်းတတ်တဲ့ မိန်းကလေး
အစွန်းရောက်လိုမျိုးပဲ ဖင်ပိတ်ငြင်းတတ်သူတို့ဟာ ပြသနာကို ရှာဖွေနေတတ်ပါတယ်။ သူမနဲ့ စကားများရင် ပြေပြေလည်လည် ရှင်းလို့မရပဲ ကျယ်ကျယ်အော်နိုင်သူက အနိုင်ရပါတယ်။
၃. အစွန်းရောက် မိန်းကလေး
တချို့သူတွေဟာ ကွဲပြားခြားနားခြင်းကို လက်မခံကြပါဘူး။ သူတို့ဟာ အစွန်းရောက်တတ်ပါတယ်။ “ဒေါ်စုကို ထောက်ခံရင် ချက်ခြင်း Unfriend လုပ်သွားပါ”။ အဲဒါမျိုးဆို Unfriend လုပ်လိုက်ပါတော့။
၄. ဘာသာတရား အလွန်ကိုင်းရှိုင်းတဲ့ မိန်းကလေး
ဘာသာတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ Status တွေပဲ မပြတ်တင်နေတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ နှလုံးသားထိပ်ဆုံးမှာ ဘုရား ရှိပါတယ်။ သင်ဟာ ဘယ်တော့မှ သူမနှလုံးသားထိပ်ဆုံးကို မရနိုင်ပါဘူး။ သင် ဘုရားနဲ့ မယှဉ်နိုင်ဘူးဆိုတယတော့ သတိထားပါ။
၅. အတည်ကြီး ပြသနာရှာသူ
သင် လိုက်နေတဲ့ ကောင်မလေးက လမ်းပိတ်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် ကော်ဖီဆိုင်က စားပွဲထိုးအကြောင်းကို FB တစ်ခုလုံး မွထနေအောင် ဆဲနေရင်တော့ သူမဟာ ပြသနာသေးသေးလေးကို အကြီးကြီးလုပ်တတ်သူ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၆. ရည်းစားဟောင်းနဲ့ မပြတ်သေးသူ
ရည်းစားဟောင်းအကြောင်း Status ကို သင်တွေ့တာနဲ့ သင့်လိုက်ချင်စိတ်တွေ လျော့နည်းသွားမှာပါ။ Profile တစ်ခုလုံး ပွထနေအောင် ရည်းစားဟောင်းကို Bash ထားရင်တော့ အဲဒါတကယ်မပြတ်နိုင်သေးလို့ပါ။ နောက်တစ်ယောက်ရှာပါ။
၇. စိတ်ခွန်အား တိုးတက်စေမယ့်ဟာတွေကို ခဏခဏတင်နေတဲ့ မိန်းကလေး
အဲဒါဟာ သူမကိုယ်သူမ စိတ်ခွန်အားတိုးတက်အောင် ကြိုးစားနေတာပါ။ ရဲဝတ်စုံဝတ်တာနဲ့ ရဲဖြစ်မသွားသလို အဲဒါတွေခဏခဏတင်တာနဲ့ စိတ်ခွန်အားရှိသူလို့ ပြောလို့မရပါဘူး။
သင်နဲ့တူတူ ဘားမှာအရက်လိုက်သောက်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးဟာ မဆိုးပါဘူးလို့ ထင်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်ကို မူးပြီးရစ်ရင်၊ အန်ဖတ်ကျုံးရရင် သိပ်ချစ်ဖို့ ကောင်းမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
၉. မလုံခြုံတဲ့ မိန်းကလေး
သူမကိုယ်သူမ မလှပါဘူး၊ ရုပ်ဆိုးပါတယ် ခဏခဏတင်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ကိုယ့်ဘာသာယုံကြည်မှုအားနည်းတာဖြစ်ရင်ဖြစ်၊ မဖြစ်ရင်တော့ သူမကို လှပါတယ် လို့ မြှောက်ပြောတဲ့ Comment တွေ လိုချင်နေလို့ပါ။
၁၀. အိုဗာ ဒရာမာ ဖြစ်နေတဲ့ မိန်းကလေး
နားလည်ရခက်တဲ့၊ လူ အာရုံစိုက်တာခံချင်တဲ့ Status တွေဟာ သင်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကောင်မလေးဟာ ပြုပြင်စောင့်ရှောက်ဖို့ အထူးလိုအပ်ပြီး အနိုင်ကျင့်ချင်တာကို ပြတာပါ။
Facebook ပျေါမှာ ရှောငျသငျ့တဲ့ မိနျးမ ၁၀ မြိုး
တဈယောကျထဲဖွဈနတေဲ့ အမြိုးသမီးတှဟော ရညျးစားရှိသူထကျ၊ ပို့ဈတငျ၊ Like ပေး၊ Fb ပျေါမှာ အခြိနျပိုပွီးဖွုနျးတတျကွပါတယျ။ တကယျလို့ အမြိုးသမီးတဈယောကျဟာ အထီးကနျြတဲ့ Status တှေ ဆကျတိုကျတငျနမေယျဆိုရငျတော့ အဲဒါ သူမ လူလှတျဖွဈကွောငျး ပွနတောပါပဲ။ ခု နညျးပညာခတျေကွီးမှာ ကောငျးတာတဈခကျြကတော့ မိနျးမတဈယောကျကို မလိုကျခငျ သူမရဲ့ အပွဈတှကေို ဝငျပွီး စုံစမျးလို့ရနတောပါပဲ။ သူမ ကပျစေးကုပျလား? သောကျတတျလား? ရညျးစားဟောငျးကို လှမျးနတေုနျးလား ဆိုတာ FB Profile မှာ ဝငျကွညျ့လို့ရနပေါတယျ။
သငျသာ သဲလှနျစ ရှာတတျရငျ သငျလိုကျမယျ့ မိနျးမဟာ သငျနဲ့ ကိုကျရဲ့လားဆိုတာ ကွိုတငျ သိရှိထားနိုငျပါတယျ။ ရှောငျသငျ့တဲ့ လက်ခဏာ ၁၀ မြိုးကတော့
၁. အတကျကွှလှနျ မိနျးကလေး
သူမက ခြိုသာပွီး ခဈြဖို့ကောငျးတာတော့မှနျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အသေးအမှားလေးကအစ စိတျလှုပျရှားနတေတျတဲ့ သူမကို ကွညျ့ပွီး ကွာရငျ သငျ ရူးခငျြလာပါလိမျ့မယျ။ လိပျပွာလေးတဈကောငျနဲ့တောငျ စိတျလှုပျရှားနတေဲ့ မိနျးကလေးမြိုးပါ။
၂. ဖငျပိတျငွငျးတတျတဲ့ မိနျးကလေး
အစှနျးရောကျလိုမြိုးပဲ ဖငျပိတျငွငျးတတျသူတို့ဟာ ပွသနာကို ရှာဖှနေတေတျပါတယျ။ သူမနဲ့ စကားမြားရငျ ပွပွေလေညျလညျ ရှငျးလို့မရပဲ ကယျြကယျြအျောနိုငျသူက အနိုငျရပါတယျ။
၃. အစှနျးရောကျ မိနျးကလေး
တခြို့သူတှဟော ကှဲပွားခွားနားခွငျးကို လကျမခံကွပါဘူး။ သူတို့ဟာ အစှနျးရောကျတတျပါတယျ။ “ဒျေါစုကို ထောကျခံရငျ ခကျြခွငျး Unfriend လုပျသှားပါ”။ အဲဒါမြိုးဆို Unfriend လုပျလိုကျပါတော့။
၄. ဘာသာတရား အလှနျကိုငျးရှိုငျးတဲ့ မိနျးကလေး
ဘာသာတရားနဲ့ဆိုငျတဲ့ Status တှပေဲ မပွတျတငျနတေဲ့ မိနျးကလေးရဲ့ နှလုံးသားထိပျဆုံးမှာ ဘုရား ရှိပါတယျ။ သငျဟာ ဘယျတော့မှ သူမနှလုံးသားထိပျဆုံးကို မရနိုငျပါဘူး။ သငျ ဘုရားနဲ့ မယှဉျနိုငျဘူးဆိုတယတော့ သတိထားပါ။
၅. အတညျကွီး ပွသနာရှာသူ
သငျ လိုကျနတေဲ့ ကောငျမလေးက လမျးပိတျတာ၊ ဒါမှမဟုတျ ကျောဖီဆိုငျက စားပှဲထိုးအကွောငျးကို FB တဈခုလုံး မှထနအေောငျ ဆဲနရေငျတော့ သူမဟာ ပွသနာသေးသေးလေးကို အကွီးကွီးလုပျတတျသူ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
၆. ရညျးစားဟောငျးနဲ့ မပွတျသေးသူ
ရညျးစားဟောငျးအကွောငျး Status ကို သငျတှတေ့ာနဲ့ သငျ့လိုကျခငျြစိတျတှေ လြော့နညျးသှားမှာပါ။ Profile တဈခုလုံး ပှထနအေောငျ ရညျးစားဟောငျးကို Bash ထားရငျတော့ အဲဒါတကယျမပွတျနိုငျသေးလို့ပါ။ နောကျတဈယောကျရှာပါ။
၇. စိတျခှနျအား တိုးတကျစမေယျ့ဟာတှကေို ခဏခဏတငျနတေဲ့ မိနျးကလေး
အဲဒါဟာ သူမကိုယျသူမ စိတျခှနျအားတိုးတကျအောငျ ကွိုးစားနတောပါ။ ရဲဝတျစုံဝတျတာနဲ့ ရဲဖွဈမသှားသလို အဲဒါတှခေဏခဏတငျတာနဲ့ စိတျခှနျအားရှိသူလို့ ပွောလို့မရပါဘူး။
သငျနဲ့တူတူ ဘားမှာအရကျလိုကျသောကျနိုငျတဲ့ မိနျးကလေးဟာ မဆိုးပါဘူးလို့ ထငျစရာပါ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ကို မူးပွီးရဈရငျ၊ အနျဖတျကြုံးရရငျ သိပျခဈြဖို့ ကောငျးမှာ မဟုတျတော့ပါဘူး။
၉. မလုံခွုံတဲ့ မိနျးကလေး
သူမကိုယျသူမ မလှပါဘူး၊ ရုပျဆိုးပါတယျ ခဏခဏတငျနတေဲ့ မိနျးကလေးတှဟော ကိုယျ့ဘာသာယုံကွညျမှုအားနညျးတာဖွဈရငျဖွဈ၊ မဖွဈရငျတော့ သူမကို လှပါတယျ လို့ မွှောကျပွောတဲ့ Comment တှေ လိုခငျြနလေို့ပါ။
၁၀. အိုဗာ ဒရာမာ ဖွဈနတေဲ့ မိနျးကလေး
နားလညျရခကျတဲ့၊ လူ အာရုံစိုကျတာခံခငျြတဲ့ Status တှဟော သငျစိတျဝငျစားနတေဲ့ကောငျမလေးဟာ ပွုပွငျစောငျ့ရှောကျဖို့ အထူးလိုအပျပွီး အနိုငျကငျြ့ခငျြတာကို ပွတာပါ။
Previous: သင့်ဇနီးရဲ့ ခင်ပွန်းကောင်းတယောက် ဖြစ်စေဖို့
Next: Miss Universe Myanmar 2015 နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း